Nhau - Zvakanakira kunwa green tea
Green tii iti inogadzirwa isina kuvirisa, iyo inochengeta zvakasikwa zvinhu zvemashizha matsva uye yakafuma mune zvinovaka muviri. Green tii inogadzirwa nekubira, kufaya uye nekuomesa mashizha emuti wetii. Icho chimwe chezvinwiwa zvinonyanya kufarirwa pasi rese uye chine nhoroondo yezviuru zvemakore. Ngatitarisei nezve kugona uye mhedzisiro ye green tea.
Kubudirira kwegreen tea
Kunwa green tea nguva dzose kwakanakira huropi hwemunhu, moyo uye ganda. Green tii inogona zvakare kuramba kukwegura kweganda, kuwedzera unyoro hweganda uye kudzivirira kuumbwa kwemakwenzi.
1. Kuvandudza kushanda kwehuropi
Green tii ine shoma kafeini, iyo inogona kukurudzira muviri wepakati tsinga system, inowedzera kunakidzwa kweiyo cerebral cortex, uye kuve nemhedzisiro yekuzorodza uye kuzorodza.
Zvidzidzo zvakaratidza kuti kugara uine caffeine kunwa kunogona kudzora njodzi yezvirwere zvekuziva senge chirwere chePasinson. Iyo zvakare ine imwe mhedzisiro pakubvisa migraine.
Iyo zvine caffeine iri mu green tea yakanyanya kuderera pane kofi, saka haina kukurudzira se kofi. Vamwe vanhu vanoti: Mushure mekunwa kofi, ndinonzwa kunge ndave muchina, saka ndinonwa kofi kubasa; mushure mekunge ndanwa tii, ndinonzwa kunge ndiri muparadhiso, saka ndinonwa tii ndichiita hurukuro.
Green tii zvakare ine amino acid, iyo inobatsira kudzora kushushikana uye kugadzirisa mamiriro. Zvidzidzo zvakaratidza kuti caffeine uye iyi amino acid inogona kusimudzira ndangariro dzevanhu uye kuisa pfungwa, kuderedza kushushikana, uye nekuvandudza kushanda kwehuropi.
2. Chengetedza mwoyo wako
Kunwa green tea nguva dzose kunobatsira kudzvinyirira chirwere chemoyo uye kuchengetedza moyo wakagwinya. Hypertension ndechimwe chezvinhu zvakajairika zvinotungamira kuchirwere chemoyo. Zvidzidzo zvakaratidza kuti kugara uchinwa girini tii kunogona zvakanyanya kudzora systolic uye diastolic reropa.
Chidzidzo che2006 chakaratidza kuti vanhu vanonwa makapu matanhatu kana anopfuura ekofi yakasvibira pazuva vane 33% mikana yekuita chirwere cheshuga chechipiri pane avo vanonwa isingasviki mukombe mumwe pasvondo.
Chidzidzo chesainzi chakaburitswa mu2020 chakatevera mapoka maviri evanhu vasina nhoroondo yehosha yemoyo. Boka rekutanga rakanwa green tea kanopfuura katatu pavhiki, uye boka rechipiri rakanga risina tsika yekunwa green tea. Anenge makore manomwe mushure mekutanga kwekudzidza, vesaenzi vakaona kuti pazera repakati makumi mashanu, vanhu vanogara vachinwa tii vanova nechirwere chetsinga yechirwere makore 1,4 gare gare kupfuura vanhu vasinganwe tii.
Katekiniki ndicho chikamu chikuru chegirini tii. Catechin yakasikwa antioxidant ine anti-oxidant, anti-kupisa uye anti-hypertensive mhedzisiro. Iyo inoderedza cholesterol mazinga nekuderedza kunwa kwecholesterol mumuviri.
Kuongororwa kwezvidzidzo gumi nemana muna 2011 kwakaratidza kuti kunwa avhareji yemikombe miviri yegirini tii pazuva kwemakore gumi kunogona kudzikisira zvakanyanya mwero we low-density lipoprotein cholesterol. Low-density lipoprotein cholesterol inonziwo "yakaipa cholesterol" nekuti inokonzeresa ropa lipids kuti iungane mune tsinga, nokudaro ichiwedzera njodzi yehosha yemoyo kana sitiroko.
4. Runako uye Kuchengeta Ganda
Izvo zvinongedzo mu green tii zvakare zvine mhedzisiro yerunako uye kutarisirwa kweganda. Tea polyphenols zvinhu zvinogadziriswa nemvura. Kugeza kumeso kwako kunogona kubvisa kumeso kumeso, kudzora pores, uye kuve nemabasa ekudzivirira hutachiona uye kutapudza. Makatekini ari mugirini tii ane yakasimba antioxidant basa. Mushure mekushandisa zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda zvine green green zvinoumbwa paganda, zvinogona kudzora kukuvara kweganda kunokonzerwa nemwaranzi ye ultraviolet muzuva.
Green tii yakaratidzirwa kuve ine anti-kuchembera zvivakwa. Vatsvagiri vakaona kuti kugara uchinwa girini tii kunogona kusimudzira ganda kuomarara.
5. Radiation kudzivirira
Kune vanhu vemazuvano vanogara vakagara kumberi kwemakomputa, nzira iri nyore yekupokana nemwaranzi yemacomputer ndeyekunwa makapu maviri kusvika matatu e green tea uye kudya orenji mazuva ese. Nekuti tii yakafuma muprovitamin A, inogona kukurumidza kushandurwa kuita vhitamini A mushure mekudyiwa nemuviri. Vitamini A inogona kugadzira rhodopsin, ichiita kuti maziso aone zvinhu zvakajeka muchiedza cherima. Naizvozvo, green tii haigone chete kubvisa macomputer radiation, asi zvakare kudzivirira nekuvandudza kuona.
Zvimwe zvinokanganisa tii tii
1. Iyo tannic acid iri muiyi inogona kutadzisa kunwa kwesimbi nemuviri wemunhu. Chingwa chisina kuviriswa senge girini tii chinogona kutadzisa kunwa kwesimbi nemuviri wemunhu. Yakaviriswa tii nhema ine mashanu muzana tanini, nepo isina kuviriswa girini tii inoverengera gumi muzana. Saka kana ukanwa girini tii yakawandisa, zvinokonzeresa kushomeka kweropa.
2. Kunwa green tea yakawandisa kunogona kukonzera kupatira. Midziyo irimo tii inosangana neprotein iri muchikafu kugadzira chinhu chitsva chisinga gaye, zvichitungamira kuzvimbirwa.
Post nguva: Kubvumbi-11-2021